Iinkampani zeNdibano zombane - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
UMvelisi weNkampani yeNdibano yeKhompyutha eBalaseleyo – PCBFuture
Yintoni iinkampani zokuhlanganisa i-elektroniki?
Iinkampani zendibano ye-elektroniki zibandakanyeka kwishishini lokuvelisa kunye nokuvavanya iindibano zebhodi yesekethe eprintiweyo, iindibano zentambo, iintambo zokubopha, iintambo zocingo kunye neebhodi zesekethe eziprintiweyo ezisetyenziselwa iimveliso ze-elektroniki kuluhlu olubanzi lwamashishini.Ngezizathu ezininzi, kuluncedo kakhulu ukuvumela umntu wesithathu enze la malungu.
Zeziphi iinkonzo zeenkampani zendibano ze-elektroniki ezinokubonelela?
Ÿ IiPCB ezithobela iRoHS.
Ÿ Ukwenziwa kweRF PCB
Ÿ I-laser microvias, i-blind vias, engcwatywa ngendlela
Ÿ Uvavanyo lombane olungenanto
Ÿ Uvavanyo lwe-PCB lwe-Impedans
Ÿ Amaxesha okutshintsha ngokukhawuleza
Ÿ Itekhnoloji yokuxhoma phezulu
Ÿ Iteknoloji yeThru-Hole
Kutheni i-PCBFuture ziinkampani ezithembekileyo zendibano ye-elektroniki?
Ÿ 1. Zonke iinjineli zineminyaka engaphezu kwemi-5 yamava ePCB.
Ÿ 2. Umzi-mveliso uxhotyiswe ngezixhobo ezahlukeneyo zemveliso ephucukileyo.
Ÿ 3. Abasebenzi banemveliso eninzi, ukulungisa iimpazamo kunye nokuhlolwa.
Ÿ 4. Sinento efunekayo ukuhlangabezana neemfuno zeprojekthi yakho ukusuka kwingqikelelo ukuya kwimveliso kwaye ube liqabane lakho elipheleleyo lobunjineli be-elektroniki nokuba inkulu okanye incinci kangakanani na iprojekthi yakho.
Ÿ 5. Sisebenza ngokukhethekileyo kwintshayelelo yemveliso entsha kwaye sinyusa umthamo wokwenziwa kwemveliso, sixhasa umjikelo woyilo womthengi uphela kunye nokukhuthaza ubuhlakani bexesha elide.
Yeyiphi eyona miba iphambili echaphazela iindleko zokudityaniswa kwe-elektroniki?
Iindleko zendibano ye-elektroniki zinokulingana noyilo lwebhodi yesekethe eprintiweyo (PCB).Uninzi lwabantu lukholelwa ukuba iindleko ziqhutywa linani elikhulu lamacandelo afunekayo kwindibano yePCB.Ngelixa oku kunokuba nefuthe, kukho nezinye izinto ezininzi ezisebenzayo.Zidibanise zonke kwaye iindleko zakho zinokunyuka.Kukho ukunqongophala kwamacandelo, kodwa kukho ezinye izinto ezinokunyusa ixabiso le-PCB.
Xa kufikwa kumacandelo, zininzi izinto ezinokuchaphazela iindleko zezixhobo zakho ze-elektroniki.Eyokuqala linani lamacandelo asetyenzisiweyo.Ngokucacileyo, okukhona iindawo ezininzi ozisebenzisayo, kokukhona liphezulu ixabiso lokuthenga izinto ezityiwayo.Oku kubandakanya ubungakanani becandelo kunye nenani leendawo ezifunekayo.Iindleko zonyuka kunye nesixa sokubekwa okufunekayo kwindibano yePCB.
Eminye imiba yamaxabiso ibandakanya ukufumaneka kwenxalenye.Olu lunxulumano olulula phakathi konikezelo kunye nemfuno.Amacandelo ekunzima ukuwafumana kunye / okanye afunwa kakhulu axabisa kakhulu.
Iteknoloji esetyenziselwa ukudibanisa nayo ichaphazela iindleko.Itekhnoloji yokunyuswa komphezulu ihlala inexabiso eliphantsi.Nangona kunjalo, ngetekhnoloji yomngxuma ithembeke kakhulu.Amanye amacandelo anokufuna ukusebenzisa zombini itekhnoloji ngexesha elinye.Oku phantse kusoloko kufuna indibano yezandla ekupheleni, ekwadibanisa neendleko ezininzi.Ngaphezu koko, njengoko kulindelwe, iindleko zendibano yephaneli enye ziya kuba ziphantsi kakhulu kunokwakha iibhodi ezinkulu ezinamanqwanqwa amaninzi.
I-PCBFuture yasekwa ngo-2009. Isebenza ngokukodwa kwimveliso ye-PCB, indibano ye-PCB kunye nokukhangela amacandelo.I-PCBFuture idlulile i-ISO9001 : inkqubo yomgangatho we-2016, inkqubo yekhwalithi ye-CE EU, inkqubo ye-FCC.
Ukutyhubela iminyaka, iqokelele inani elikhulu lemveliso yePCB, iMveliso kunye namava okulungisa ingxaki, kwaye ixhomekeke kula mava, ibonelela ngamaziko ophando lwenzululwazi aphambili kunye nabathengi bamashishini amakhulu kunye naphakathi kunye nokuveliswa kokumisa okukodwa, ukuwelda kunye nokulungiswa kweempazamo. iibhodi eziprintiweyo eziphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu kwiisampuli ukuya kwiibhetshi Olu hlobo lwenkonzo lusetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo afana nonxibelelwano, i-aerospace kunye ne-aviation, i-IT, unyango lwezonyango, indalo, amandla ombane, kunye nezixhobo zokuvavanya ngokuchanekileyo.
Inkonzo ye-PCBFuture idibanisa isisombululo esipheleleyo ukusuka kuyilo loyilo, ukuya kwiinkqubo zokuvelisa kunye nolungiselelo.Iinkonzo ngokuqinisekileyo ziya kukunceda wonyuse ukukhuphisana kwakho, ngenkxaso yabathengi kwangexesha, ngokungqongqo ulawulo lomgangatho, kunye namaxabiso amahle, ngeendawo ezizinikeleyo nezikhethekileyo zemveliso kwilizwe elikhuphisana ngeendleko.
1. Yeyiphi imigangatho yokuthotyelwa kweemveliso zakho?
Zonke iimveliso zethu zenziwe phantsi kolawulo olungqongqo lwekhwalithi kwaye zihambelana ne-ISO 9001: 2015, RoHS (Ukuthintelwa kwezinto ezinobungozi), imigangatho ye-IPC610, njl. Sinazo zonke ezi ziqinisekiso zesiqinisekiso njengobungqina, kwaye ukuba ufuna ukujonga, nceda qhagamshelana nathi nge-imeyile sales@pcbfuture.com kwaye siya kukubonisa.Iimveliso ezahlukeneyo zinemigangatho eyahlukeneyo yokuthotyelwa, kwaye ngezantsi kukho itheyibhile yemigangatho yokuthotyelwa kwemveliso yethu.
2. Ii-PCB endizifumeneyo azifikeleli kwiimfuno njengoko bendizi-odole.Ngaba ndingayifumana imali yam, okanye uyayenza kwakhona ngeodolo yam?
Ewe kunjalo.Ukuba ii-PCBs, i-PCBA, ii-stencils ze-SMT, i-electronic components, i-PCB layouts, njl.njl. esikunikayo akuhlangabezani neemfuno zakho, nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyile sales@pcbfuture.com, kwaye siya kwenza kwakhona ude ufumane isiphumo sanelisekile. .
3. Kuthekani ukuba inkampani yekhuriya (i-DHL njl.,) iyasilela ukuzisa ii-PCB zam njengoko kucwangcisiwe?
Oku kwenzeka ngamanye amaxesha, nangona kunqabile kakhulu.Ukuba oku kuyenzeka, nceda uqhagamshelane nenkampani yekhuriya malunga nexesha elihlaziyiweyo lokuhambisa.Nangona ngokusemthethweni singenalo uxanduva lokulibaziseka, siza kulandela okanye sifowunele inkampani yekhuriya ukuze sihlaziywe.Eyona meko imbi kukuba siza kukwenzela kwakhona iiPCBs kwaye siphinde sizithumele kuwe.Ngeentlawulo ezongezelelweyo zekhuriya, singathetha nenkampani yekhuriya ukufumana imbuyekezo.
4. Isebenza njani ipolisi yakho yabucala?
Siyayihlonipha imfihlo yabo bonke abathengi bethu.Siyathembisa ukuba soze sabelane ngolwazi lwakho lobuqu nawo nawaphi na amaqela esithathu.
5. Ngaba sinokuthethathethana ngexabiso lam?
Nangona amaxabiso ethu ephantsi kakhulu, usengaxoxa ngexabiso nathi ukuze ufezekise injongo yakho ekucutheni iindleko, njengoko kufunwa yimarike.
6. Ngaba imaski ye-solder iyawanyusa amaxabiso akho?
Hayi, imaski yomthengisi lukhetho oluqhelekileyoiiprototypes zethu, ngoko zonke iibhodi ziveliswa nge-solder mask kwaye oku akunyusi ixabiso.
7. Ziziphi iinxalenye esiza kuzihlanganisa?
Ngokubanzi, sihlanganisa kuphela ezo nxalenye oziqinisekisileyo xa uodola.Ukuba awucofanga iqhosha elithi "qinisekisa" kumacandelo, nokuba kwenzeka kwifayile ye-BOM, asiyi kukuhlanganisela zona.Nceda ujonge ngobubele kwaye uqinisekise ukuba awuphoswanga nawaphi na amacandelo xa ubeka iodolo.
8. Ngawaphi amaziko okuvelisa onawo?
Sinezixhobo zemveliso yendibano yePCB esebenzayo.Iqela lethu labaqhubi abaqeqeshiweyo linokwakha amanani amancinci kunye namakhulu ngenyanga.Abasebenzi bethu bendibano banamava kakhulu ekukhetheni nasekubekeni nasekuphumeni komngxuma besebenzisa oomatshini bokuncamathelisa, ii-oveni kunye noomatshini bokuthengisa amaza.
9. Zeziphi iziqinisekiso iqela lakho lendibano ye-elektroniki elinayo?
Icandelo lethu le-electronics linomxube wemigangatho yemfundo ukuya kwinqanaba lesidanga, kunye nezifundo ezahlukeneyo zoqeqesho ezikhethekileyo kunye nemigangatho yemfundo esemgangathweni.Uluhlu lwezakhono zeqela ukusuka kubunjineli besoftware, ubunjineli boyilo lwe-elektroniki, iCAD kunye nophuhliso lweprototype.
10. Ngaba unawo amaxesha amiselweyo okukhokela iiodolo zendibano?
Xa usibonelela ngeefayile zakho zeGerber kunye neBOM, siya kucwangcisa ngokufanelekileyo umsebenzi wakho wendibano kwaye sikunike ixesha lokukhokela eliqinisekileyo.Nangona kunjalo, njengomthetho wesithupha, inkonzo yethu epheleleyo yendibano yePCB inexesha leeveki ezintathu zokukhokela.Amaxesha ethu okuguqula ayahluka ngokuxhomekeke kubungakanani obufunekayo, ukuntsonkotha kolwakhiwo kunye neenkqubo zendibano yePCB ezibandakanyekayo.